True Fiction ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံကား ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ….
အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Ji Hyun-woo, Oh Man-seok, Lee Eun-woo, Kim Hak-cheol နှင့် Jo Eun-Ji တို့ကို တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ….
မြို့တော်ဝန်လောင်း Lee Kyung-seok ဟာ ယောက္ခထီးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် …
တစ်နေ့ ယောက္ခထီးရဲ့ အမိန့်ဖြင့် ငွေတွေကို ဝှက်ရန် အပန်းဖြေအိမ်သို့ သွားရာမှာ မယားငယ် Lee Ji-Young အား အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားရင်း အစောင့်ဟူသော ထူးဆန်းတဲ့သူတစ်ဦး Kim Soon-Tae နှင့်တွေ့ကာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တချို့နဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရပြီးနောက် တစ်ညတာအတွင်းမှာ နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် …
နောက်ဆုံး သူ့ဘဝရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလား ? မြို့တော်ဝန်ဆက်ဖြစ်နိုင်မလား ? ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်မှာ ဝင်ရောက် ပတ်သတ်မိတာလဲ ? စတာတွေကိုတော့ True Fiction ဆိုတဲ့ Korea Thriller ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာပဲ ဆက်လက် အဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်နော် …
Rating အရ IMDb မှာ 6/10 ရရှိထားပါတယ် …
Translator : Chu Salae
Quality : 720p FHDRip
Openload.co Myanmar 838 MB Download Soliddrive.co Myanmar 838 MB Download
Trailer: True Fiction ( 2018 )